Ku deeq deeqda isu-dheellitirka kiimikada | Qaamuuska Isku-dheelitirka Kiimikada
Ku deeqo Waxbarashada Vietnam
Maxaan u halganeynaa ...
Websaydhkeennu wuxuu u adeegaa malaayiin isticmaale bil kasta welina wuu sii kordhayaa, sidoo kale waa inaan bixino gunno si aan ugu tabaruceyno inaan ku sii jirno waxyaabaha ku jira degelkan. Tani waxay nooga baxday dhowr kun oo doolar bil kasta.
Si kastaba ha noqotee, weligood 10 sano ma hayno wax dakhli ah oo muhiim ah marka laga reebo lacagta aasaasaha, kuma noolaan karno kharashka sii kordhaya ee dayactirka. Sidaa darteed, xayeysiiska socodsiintu waa xal ku meel gaar ah oo lagu daboolayo 20-30% kharashka hawlgalka
Waxaan rajeyneynaa in xayeysiiskeena uusan kaa dhigeynin inaad dareento wax aan habooneyn.
Haddii aad aragto wax xayeysiis ah oo aan ku habboonayn ujeeddada waxbarashada fadlan si toos ah ila soo xiriir [emailka waa la ilaaliyay]
Sideed u caawin kartaa ...
Isticmaal ahaan, waad iska joojin kartaa xayeysiiska xayeysiiska, tani waxay naga caawin laheyd dhowr senti markasta oo aad na soo booqato.
Shirkad ahaan, waad nala soo xiriiri kartaa qandaraaska xayeysiinta, waxaan rajeyneynaa inaan dhisno iskaashi muddo dheer ah.
Halyeey ahaan, waxaan si toos ah noogu biirin karnaa xiriiriyeyaasha hoose. 20% dhammaan deeqaha waxaa loo wareejinayaa ururkeenna aan macaash doonka ahayn, kaasoo maalinba maalinta ka dambeysa ka shaqeynaya miyiga oo horumarinaya waddooyin cusub iyo iskuullo mustaqbalka waxbarashada ah.